अबिरल वर्षाका कारण दाङसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित, जनधनको क्षति | Indrenionline.com
Home मुख्य समाचार अबिरल वर्षाका कारण दाङसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित, जनधनको क्षति
अबिरल वर्षाका कारण दाङसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित, जनधनको क्षति
२०७३ श्रावण ११ गते मंगलबार ०६:११ बजे
दाङ, ११ साउन
अविरल वर्षाका कारण दाङसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै जनधनको क्षति भएको छ । अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरेमा परी राप्तीको प्युठान सहित अर्घाखाँची, पाल्पा, लगाएत अन्य जिल्लामा मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन । पहिरोका कारण प्यूठानमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना वेपत्ता भएका छन ।
पूजा गाविस वडा नं. १ मा ३५ वर्षीया सुपारी मल्ल र उहाँका १० वर्षीय छोरा मुकेस मल्लको शव पहिरोले पुरेको अवस्थामा भेटिएको छ । त्यस्तै पहिरोले लुङ गाविस वडा नं. ६ वाहाने निवासी अन्दाजी २२ बर्षीया शोभा रिजाल, सोही ठाउँ निवासी अन्दाजी ११ वर्षीय किरण थापा, खवाङ ७ निवासी अन्दाजी २५ वर्षीया काली परियार वेपत्ता भएका छन ।
यस्तै पहिरोले लुङमा चारवटा घर पहिरोले पुरेको छ । गएराति झरेको पहिरोले स्थानीय शोभा रिजालको पक्कि घर, श्रद्धा रिजाल, भोजवहादुर पुन, वशन्ता केसीको घर पुरेको प्रहरीले बताएको छ । त्यस्तै सारीवाङ गाविस स्थित झिमरुक खोलाको किनारमा दुईवटा शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ ।
उता, पहिरोले पुरिएर गुल्मीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ । गुल्मीको हस्तिचौर गाविस एक मल्दी निवासि एकै परिवारका ६२ वर्षीय कालीका दर्जि, ४९ वर्षीय तुलसी दर्जि र १९ वर्षीय अस्मिता दर्जी रहेका छन् ।
त्यस्तै बिसुखर्क गाविस ९ मा पहिरोले पुरिएर गोपाल रानाका ८ वर्षीय छोरा सुजन राना र ६ वर्षीय छोरी सिमाना रानाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक भोला रावलले जानकारी दिए ।
पहिरोमा पुरिएर हस्तिचौरका ५० वर्षीय विष्णु सारु घाइते छन् । अहिले पनि घरमाथिवाट पहिरो खसिरहेको कारण पहिरोमा पुरिएका विसुखर्कका राना परिवारको उद्धार गर्न समस्या परेको प्रहरीले वताएको छ ।
यसैबीच, बढीघाट खोलामा आएको बाढीले मुसिकोट र वामी जोड्ने सुदिको झोलुङ्गे पुल र ग्वालीचौर र पौदी जोड्ने झोलुङ्गे पुल समेत बगाएको छ । वाढीका कारण वाग्लुङ्गको खर्वाङ्ग वजार, गुल्मीको भुवाचिदि, उर्लीखोला, मजुवा, साहाघाट,चोरकाटे, रुद्रवेणी लगाततका वजार क्षेत्र समेत खतरामा परेका छन् ।
वजार क्षेत्रका वासिन्दा सुरक्षीत स्थानमा सर्न थालेका छन् । वाढीलले बम्घामा एक हल गोरु र एउटा गाई समेत बगाएको छ । गत ५५ बर्षपछि गुल्मीमा यति ठूलो बाढी आएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । वाढीले सयौं रोपनि जमिन डुवानमा पारेको छ । बाढी र पहिरोका कारण गुल्मीमा एक दर्जन भन्दा बढी घर गोठमा समेत क्षती पुगेको खबर छ । यता, रातभरको भारी वर्षापछि बुटवलको तिनाउ नदीमा पानीको सतहे बढेको छ ।
नदीले छेउछाउको बस्ती समेत काटेको छ । बुटवल १३ बुद्धनगरको बस्तीमा बाढी पसेपछि स्थानीयहरु सुरक्षित स्थानमा गएका छन् ।खोलाको सतह बढेपछि पाल्पाको दोभानबाट साईरन बजाइएको छ भने रुपन्देहीमा रहेका ३ वटा साइरन पनि बजाइएको छ । बुटवल १३ को हात्तिसुढमा तिनाउले छेउको बांकी भाग कटान गरेर बस्तीसम्म क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तिनाउको किनारमा ११ हजार सुकुम्बासी बस्ने भएकोले उनीहरू जोखिममा छन् । तिनाउमा यो वर्षकै ठूलो बाढी आएको स्थानीयले बताए । अहिले तिनाउ आसपासमा प्रहरी परिचालन गरेर स्थानीयलाइ बस्तीमा जान रोक लगाइएको छ । बुटवल १३ को झोलुङ्गे पुलको बुद्धनगरपट्टिको भागको जग (खम्बा) बाढिले कटान गरेपछि पुल नै भत्कने खतरा बढेकोछ ।
यसैबीच, बुटवल १३ देबिनगर र बुद्धनगर जोड्ने झोलुङ्गे पुल तिनाउको बाढीले बगाएको छ । तिनाउको यो पुल बगाएपछि स्थानीयहरुमा भागाभाग भएको छ । तिनाउ वरपरको सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ । बाढी बस्तीमा पसेसँग मानिसहरू समस्यामा परेका छन् । उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । बुटवलको प्रगतिनगरमा ५ वटा घर बाढिले बगाएको छ ।
त्यस्तै पाल्पा दोभान १ मा रहेको कामीटोलमा पहिरोले ६ घर पुरेको छ भने एक किशोरीको ज्यान गएको छ । १५ वर्षीय अस्मिता बिकको मृत्यु भएको दोभान प्रहरीले बताएका छन् । गएरातिदेखि पारिरहेको वर्षाकारण पहिरो खसेको थियो । स्थानीयले भने बिहान ४ बजेमात्रै पहिरोले पुरेका थाहा पाएका थिए । टेक ब बिक,अमर बुढा,इन्द्र खत्री ,हरिलाल परियार ,किसान बिकको घरमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनास्थलमा उद्धार शुरु गरेको छ ।
यता, र्घाखाँचीको ठाँडामा पहिरोले घर बगाउँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । प्रेमबहादुर घर्तीको घर पहिरोले बगाउँदा उहाँकी जेठी छोरी १७ वषर्की शारदाको ज्यान गएको हो । कान्छी छोरी १६ वर्षकी बालकुमारीको भने उद्धार गरिएको छ । प्रेमबहादुरको दुई वटा गोठ बगाउँदा पशुचौपाया पनि मरेका छन् । यस्तै पहिरो खसेपछि गोरुसिंगे–चण्डिखर्क सडक अवरुद्ध भएको छ ।।
Previous articleसोताले बगाउदा तुलसीपुरकी एक महिलाको मृत्यु
Next articleजाजरकोट सडक खण्डका विभिन्न ठाँउमा काम अलपत्र